Jaona 19:38-42 "38 Ary rehefa afaka izany, Josefa avy any Arimatia (mpianatr’i Jesosy izy, nefa tamin’ny mangingina ihany noho ny fahatahorany ny Jiosy) dia nangataka tamin’i Pilato, mba hahazoany manaisotra ny fatin’i Jesosy. Ary nanaiky Pilato. Dia lasa izy ka nanaisotra ny fatin’i Jesosy. 39 Ary tonga koa Nikodemosy (ilay nankao amin’i Jesosy nony alina tamin’ny voalohany) ka nitondra miora sy hazo manitra voaharoharo, tokony ho zato livatra. 40 Dia noraisiny ny fatin’i Jesosy ka nofonosiny lambam-paty mbamin’ny zava-manitra, araka ny fanaon’ny Jiosy, raha mamboatra faty halevina. 41 Ary nisy saha teo amin’ilay nanomboana Azy tamin’ny hazo fijaliana; ary teo anatin’ilay saha nisy fasana vaovao, izay tsy mbola nandevenana olona.42 Ary teo no nandevenany an’i Jesosy noho ny andro fiomanan’ny Jiosy, satria teo akaiky ny fasana."
Josefa avy any Arimatia sy Nikodemosy dia samy nanaraka ny Tompo saingy tsy mba niseho. Natahotra mantsy izy ireo sao samborina na voaroaka. Niseho anefa izy ireo rehefa maty ny Tompo. Tsy nisy tamin’ny 11 lahy sahy naka ny fatin’ny Tompo mba halevina. Nandray andraikitra izy roalahy ireto handevina ny Tompo. Nahoana ary izy ireo no tsy natahotra intsony? Satria efa tanteraka ny sitrapon’ny Jiosy tamin’i Jesoa, ny faty koa tsy maintsy alevina. Zava-dehibe ny fandraisana andraikitra toy izao na dia vitsy aza no mba tonga saina. Toy izao no fikarakarana ny fatin’ny Jiosy mba tsy halaky simba. Tsy niray fasana tamin’olona ny Tompo fa fasana vaovao efa voaomana. Mahagaga mihitsy ny